मौसमी सागपात : कति पोषिलो, कति स्वादिलो ? – korea pati
May 3, 2020 Korea patiLeaveaComment on मौसमी सागपात : कति पोषिलो, कति स्वादिलो ?
यतिबेला तपाईंको करेसाबारीमा सागपात उम्रिएका छन् । जस्तो कि, लट्टेको साग, बेथेको साग । कतिपय ठाउँमा इस्कुस वा फर्सीको मुन्टा पनि पाइन्छ । यसैगरी गाउँघरतिर चिन्डे, निगुरो, जरिङ्गो, च्याउ पाउने सिजन हो यो ।हुन त अहिले हाम्रो भान्सामा बेमौसमी तरकारी भित्रिने गर्छ । हामीलाई पनि बेमौसमी तरकारी नै स्वादिलो लाग्छ । अर्थात प्रतिकुल मौसममा उत्पादन गरिएका सागसब्जीहरु ।
जबकी स्वास्थ्यका लागि हामीले त्यही खानेकुरा खानु उपयुक्त हुन्छ, जुन मौसम अनुकुल होस् । जुन मौसममा धर्तीका जस्तो उत्पादन हुन्छ, त्यही खानेकुरा हाम्रो शरीरका लागि उपयोगी हुन्छ ।अहिले भने मौसमी सागपात पाउने बेला हो । यी सागपात स्वादिलो मात्र होइन, पोषणयुक्त पनि हुन्छ ।
कतिपयलाई औधी स्वाद लाग्छ, लट्टेको साग । वैशाखदेखि जेठसम्मको अवधीमा लट्टेको साग पर्याप्त पाइन्छ । यो सजिलै उम्रने र हुर्कने भएकाले सस्तो पनि पर्छ । साथै यसमा किटनासक लगायत हानिकारक तत्व प्रयोग हुने संभावना पनि न्युन हुन्छ ।लट्टेको व्यवसायिक खेती गरिएको त्यती पाइदैन । सिजनमा अनुकुल माटोमा सजिलै उम्रने भएकाले यसको व्यवसायिक खेती नभएको हुनसक्छ । जे भएपनि लट्टेको साग भने स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक छ ।लट्ेको सागमा विभिन्न किसिमको पोषक तत्व पाइन्छ । यसमा खासगरी खनिज पदार्थ फलाम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।
बेथेको साग दुई किसिमको हुन्छ, एक सामान्य हरियो पात भएको । अर्को पातमा रातो भएको । दुबै किसिमको साग निकै लाभदायक हुन्छ ।खासगरी खोकी, पेटको समस्या, कब्जियतमा बेथेको साग उपयोगी हुन्छ । बेथेको साग नियमित सेवन गर्दा बाथ अर्थात युरिक एसिड, रक्त वा छालाको विकार हट्छ । बेथेको सागले शरीरभित्रको विकार हटाउन निकै सहयोग गर्छ ।बेथेको सागमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन, मिनरल्स, आइरन प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसमा सोना धातु पनि पाइन्छ, जो अन्य सागसब्जीमा पाइदैन । औषधीको रुपमा बेथेको पञ्चाङ अर्थात पाँच अंग जरा, डाँठ, पात, फल र फूल प्रयोग गरिन्छ। यसको डाँठ र पातमा प्रोटिन, खनिज, भिटामिन पाइन्छ ।बेथेको सागमा सेलिनियम, ओमेग थ्रि पनि पाइन्छ । अनियमित महिनावरी, कब्जियत, पत्थरी जस्ता समस्यामा बेथेको साग उपयोगी हुन्छ ।
फर्सीको मुन्टा फाइबरको राम्रो स्रोत हो । यसले पाचन यन्त्रलाई राम्रो बनाउँछ । यसमा भिटामिन ई, सी, ए, बी, पोटासियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कपर, प्रोटिन पाइन्छ । साथै यो आइरन, फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थको स्रोत पनि हो । यसमा फाइबर त पाइने नै भयो ।फर्सीको पात तथा मुन्टाको सेवनले हामीलाई कतिपय रोगको संभावनाबाट टाढा राख्छ । फर्सीको मुन्टा खासगरी उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर जस्ता रोगबाट बच्न लाभदायक हुन्छ । फर्सीको मुन्टामा हाइपोग्लिसिएमिक नामक तत्व हुन्छ, जसले शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ । पाचन यन्त्रलाई तन्दुरुस्त राख्न पनि यो उपोगी हुन्छ । यसमा पाइने पोटासियमले पाचन यन्त्रलाई चुस्त राख्छ ।